Ihe ndi ozo - WRSP
RWA n'okpukpe na mmụọ nsọ ọrụ ego
Akwukwo akwukwo ndi a raara nye nyocha banyere okpukpe di iche iche
Nova Religio bu akwukwo di iche iche nke mba di iche iche nke na-ebiputa ihe omuma nke mbu banyere mmegharia ndi ozo na ndi ozo di iche iche na ebumnuche nke inye aka n'inwe ihe omuma nke ihe omuma ndia na ebe ndi mmadu ha huru.
Journal of Contemporary Religion bụ akwụkwọ akụkọ ụwa nke na-enyocha nkwupụta dị iche iche nke okpukpe na ọnọdụ ime mmụọ, na mmegharị ọhụrụ ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ, site na echiche mmadụ, ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke uche, na nke nkà mmụta sayensị.
Akwụkwọ bụ International for Studying New Religions (IJSNR) nkwado nke International Society maka Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Ọhụrụ (ISSNR), nke nwere isi ụlọ ọrụ ya na Goteborg, Sweden. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akwalite nnyocha nchịkwa banyere ụdị okpukpe dị iche iche, ma n'ụdị mmegharị okpukpe ọhụrụ na okwu ọhụrụ nke okpukpe ndị e guzobere eguzobe.
Akwụkwọ CESNUR guzobere na 2017 site na Centre for Study on New Religions na Massimo Introvigne (Editor) na PierLuigi Zoccatelli (Deputy Editor). Ịntanetị, akwụkwọ ntanetị nwere ike ịchọta isiokwu, na ịkwado maka okwu ndị pụrụ iche, na mpaghara nke okpukpe okpukpe, nnọkọ okpukpe ọhụrụ, mmegharị anya nke esoteric, ime mmụọ ọzọ, imegharị okpukpe na nke ime mmụọ na nkà.
Umu akwukwo ndi choro na omumu nke okpukpe di iche iche
American Academy of Religion (AAR) bụ nnukwu ndị ọkachamara ọkachamara na-anọchite anya ọmụmụ okpukpe. Ebumnuche nke AAR bụ imeju mkpa nke ịghọta “ọdịnala okpukpe, okwu, ajụjụ na ụkpụrụ”. AAR na-enwe nzukọ kwa afọ n’obodo ndị dị na United States ma na-ebipụta ya Akwụkwọ akụkọ American Academy of Religion. AAR na-akwado Newtù Okpukpe Ọhụrụ, nke “na-achọ ime ka nghọta nke usoro okpukpe ọzọ, nke pụtara ìhè, ma ọ bụ nke ọhụrụ (NRMs) gara aga na nke oge a.”
Center for Studies on New Religions (CESNUR) bụ ụlọ ọrụ nke onwe ya, nke mba ụwa nke na-akwalite nchọpụta nke ndị ọkà mmụta banyere obere okpukpe, òtù okpukpe ọhụrụ, ụlọ ọrụ oge ochie, na ụlọ akwụkwọ ime mmụọ na Gnostic. A na-enwe nzukọ kwa afọ na saịtị gburugburu ụwa. Ebe nrụọrụ weebụ CESNUR nwere ndepụta dị ukwuu nke akwụkwọ na mmegharị okpukpe ọhụrụ, akwụkwọ ndị e dere na nzukọ CESNUR, na akwụkwọ iwu / akụkọ gbasara ihe gbasara okpukpe ọhụrụ.
Network Network na-elekwasị anya na Mgbanwe nke okpukpe (INACHI) bu hiwere na 1988 dika ndi otu oru nlere anya nke oma ma guzosie ike ugbu a na King's College, London. Ndị ụlọ ọrụ Britain Home na ụlọ ụka ndị isi na-akwado nzukọ a. Ebumnuche INACHI bụ nnakọta na igbasa ozi metụtara na nke dị ugbu a gbasara ndị otu pere mpe.
Association maka Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ nke Ọmụmụ Ọhụrụ (AASNR) bụ ntụkwasị akwụkwọ mmụta na otu ụlọ ọrụ na-abụghị nke na-akwalite nnyocha gbasara agụmakwụkwọ n'ọhịa ọhụrụ, ndị ọzọ na okpukpe okpukpe dị nta na oge akụkọ ihe mere eme. AASNR kwa afọ na-enye Thomas Robbins Award for Excellence in Study of New Religions and Helen Crovetto Award for Excellence in Study of New Movements with Ties to South Asia. A na-enye onyinye abụọ Robbins kwa afọ maka ihe abụọ kachasị dị ịrịba ama n'isiokwu bu ụzọ nke Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies. A na-enye onyinye a na-enye Crovetto n'afọ ọ bụla mgbe a na-ebipụta isiokwu na-akwado nrite akara ngosi na ọkwa ndị bu ụzọ nke Nova Religio.
Blọọgụ dị mkpa na Ọmụmụ nke Okpukpe nke Agba Ọhụrụ
Ederede Dị Nsọ bụ onyinye enyemaka e nyere na Mahadum Northeastern nke nwere ọrụ ya na-enye "nkwado, akụrụngwa, na netwọkụ maka ndị gụrụ akwụkwọ n'okpukpe gbadoro mkpa nyocha ha nye ndị na-ege ntị."
Ebe nrụọrụ weebụ na-enye Ozi gbasara otu okpukpe dị iche iche
Project Pluralism e guzobere na Mahadum Harvard na 1991. Ihe omuma nke Project Pluralism ga-aghota mgbanwe di iche iche nke odida okpukpe ndi America, ichoputa otutu okpukpe ndi ozo, ichoputa ihe di iche iche di iche iche putara, na ighota ihe omuma nke okpukpe di iche iche na America. A na-akwụ ụgwọ nlekọta pụrụ iche nye ndị okpukpe ọhụrụ nke ndị si mba ọzọ.
Okpukpe nke oge ochie na akụkọ ihe mere eme bụ blọgụ nke Ngalaba Ọmụmụ Ihe Okpukpe na Mahadum Open. Ihe oru ngo a kwuru na "Anyị nwere mmasị n'okpukpe nke oge a, yana mmekọrịta ya na ọdịbendị, ọha mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otú ọ dị, ihe ndị na-aga n'ihu na mgbanwe na-amasịkwa anyị, ma na-achọ ime ka anyị mata banyere ọmụmụ ihe na nghọta nke okpukpe site n'echiche nke akụkọ ihe mere eme. ”
Ogologo okpukpe nke ndidiNdị Ontario na-elekọta ndị mmadụ gbasara nnwere onwe okpukpe. Ebe nrụọrụ weebụ na-elekwasị anya na mmegharị okpukpe nke oge a na profaịlụ njirimara nke ọtụtụ arụmọrụ dị ugbu a yana edemede gbasara nsogbu ndị a. Nkọwapụta nwere ozi gbasara akụkọ ihe mere eme, nkwenkwe, omume na nzukọ nke otu.
Ozi Okpukpe WorldWide “Bụ ọrụ na-abụghị nke na-enye ndị ụlọ akwụkwọ mba ụwa na ndị iwu obodo ozi akụkọ okpukpe dị na gburugburu ụwa…. A na-enyocha ma na-achịkọta akụkọ akụkọ WWRN na ozi kwa ụbọchị, gụnyere ọtụtụ isiokwu okpukpe nke akọwapụtara ugbu a na mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa, na-elekwasị anya na nnwere onwe okpukpe, okwu ụka na nke steeti, iwu gọọmentị dịka o metụtara òtù okpukpe, yana dị ka òtù okpukpe ọhụrụ (NRMs). ”
World Religious bụ “ihe ọmụma banyere okpukpe na ọmụmụ okpukpe maka ndị ọkà mmụta na ụmụ akwụkwọ.” Ebe ahụ nwere “ọdịnala okpukpe ndị e gosipụtara na mbụ na Middle East ma ọ bụ West Asia tinyere ndị sitere na Sourth na East Asia.”
Mgbasa Ozi N'iji Mgbasa Ozi bụ weebụsaịtị nke gbasaa site na ebumnuche mbụ ya iji nyere ụmụ akwụkwọ na-amụghị akwụkwọ aka nyocha nke mmegharị okpukpe ọhụrụ ka ọ gbasaa ozi nke ibipụta ọdịnala niile na-azọrọ ọnọdụ okpukpe ma ọ bụ nke mmụọ. Ebumnuche nke saịtị ahụ bụ iji dozie nghọta ọha na eze banyere okpukpe ọhụrụ, nke ọzọ na nke pere mpe ma mee ka ọha na eze “chee echiche” ihe dị n’otú ọtụtụ mmadụ si ekpe okpukpe taa.
A Njem site NYC okpukpe bụ weebụsaịtị malitere na Julaị 9, 2010. Ebe ahụ kọwara ọrụ ya dị ka “ịchọpụta, idekọ na ịkọwa oke mgbanwe okpukperechi na-eme na New York City.
Ebe nrụọrụ weebụ na-enye ozi gbasara omenala okpukpe
British Broadcasting Corporation (BBC) ejikọtara ozi gbasara nkwenkwe na omume nke ọtụtụ omenala okpukpe.
Nchịkọta nke Okpukpe Worldwa nke Cumbria University nke dị na England na-edepụta usoro ọdịnala nke ọdịnala ụwa ndị dị mkpa nakwa akụkọ dị mkpirikpi banyere ọdịnala ọ bụla.
Njikọ nke Religion Religion (THEARDA) Archive nwere ihe ọmụma banyere usoro ọmụmụ nke ọtụtụ òtù ụka ndị Kraịst.
Adherents.com na-enye ọnụ ọgụgụ ndị otu maka okpukpe ndị ụwa tinyere ndepụta nke ihe karịrị òtù okpukpe 4,000 gburugburu ụwa. E nwekwara ozi gbasara otu okpukpere chi dị ukwuu na United States
Eziokwu nke okpukpe onye nke nwere onwe ya na-akwado ya ma nwee mkpirikpi mkpirikpi nke ọtụtụ omenala okpukpe na òtù okpukpe nke oge a.